ရေဒီယို Rickoooo ရဲ့လေကြောင်းလိုင်း paks အတွက်အနက်ရောင်စတုဂံအဖြစ်ဖွင့်ပြပါ
မေးခွန်း ရေဒီယို Rickoooo ရဲ့လေကြောင်းလိုင်း paks အတွက်အနက်ရောင်စတုဂံအဖြစ်ဖွင့်ပြပါ
2 နှစ်ပေါင်း4ရက်သတ္တပတ်အကြာ #735 by spilok
အဘို့ဎ 737 pak prepar3dv4, အရာအားလုံးရေဒီယိုအိုင်ကွန်ကိုကလစ်တဲ့အခါမှာ မှလွဲ. ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ရုံကြီးတွေအနက်ရောင်စတုဂံ။ အဆိုပါရေဒီယိုကိုပြသရသည့်အခြေအနေမဆိုလမ်း?
ps ။ ဤသည်ကိုလည်းဘိုးအင်း 717 pak နှင့်အတူဖြစ်ပျက်နှင့် 787 pak
2 နှစ်ပေါင်း6days ago #768 by spilok
အားလုံးယခု fixed ။ re-install ... တစ်ဦးထားရန်မကြိုးစားပါလိမ့်မယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ FSX လေယာဉ်သို့ prepar3dv43အစဉ်အဆက်ကိုထပ်။